ကျနော်တို့ ကားလောကမှာ ကားပြုပြင်တဲ့အခါမှာ မကြာခဏ ကြားနေရတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုက Relay ပါပဲ။ Relay ပျက်သွားပြီ၊ Relay မကောင်းတော့ဘူး၊ Relay လဲရမယ်အစရှိသဖြင့် ဒီ စာလုံးကို မကြာမကြာ ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒီနေ့ ဒီ Relay ဆိုတာဘာလဲ၊ ဘာအလုပ်လုပ်တာလဲ၊ ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းထားတာလဲဆိုတာလေးတွေကို အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးပါ့မယ် ခင်ဗျာ။
Relay တွေကို ကား Starter Motor အတွက် Start ဆွဲတဲ့အခါသုံးတော့ Starter Relay၊ ကားဟွန်းတီးတဲ့အခါ သုံးတော့ Horn Relay၊ ရှေ့မီးကြီးတွေအတွက် သုံးတော့ မီးကြီး Relay အစရှိသဖြင့် ကားမှာပါတဲ့ ပစ္စည်းပေါင်းမြောက်များစွာအတွက် အသုံးပြုကြပါတယ်။ Relay ဆိုတာသိသူတွေအတွက် လွယ်ကူရိုးရှင်းပေမဲ့ မသိသေးသူတွေအတွက် ခြေထောက် ငုတ်လေး ၄ ငုတ်၊ ၅ ငုတ်နဲ့ အတော်မျက်စိလည်တတ်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။ ကျနော်ကတော့ မသိနားမလည်သေးသူတွေ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိအောင် ရည်ရွယ်ပြီး အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားရေးသားလိုက်ပါတယ်။
Relay ဆိုတာ တကယ်တော့ Electromagnetic Switch ဆိုတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက် ခလုတ်လေး တစ်ခုပါပဲ။ ရိုးရိုးအဖွင့်အပိတ် ခလုတ်မဟုတ်ဘဲ လျှပ်စစ်ပေးလိုက်ရင် သံလိုက်ဖြစ်ပြီး အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပေးတဲ့ ခလုတ်လေး တစ်ခုလို့ မြင်ရပါမယ်။ Relay ရဲ့ အတွင်းပိုင်း ဖွဲ့စည်းပုံလေးတွေကို တစ်ချက်လေ့လာကြည့်ပါမယ်။
ပုံမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း Relay မှာ ကြေးနန်းကြိုးတွေခွေပတ်ထားတဲ့ (Iron Core) လျှပ်စစ်ပေးရင် သံလိုက် ဖြစ်သွားတဲ့ Electromagnet ဆိုတာပါပါတယ်။ နောက် Movable Contact ဆိုတဲ့ လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ Armature မောင်းလေးတစ်ခုပါတယ်။ နောက် မလှုပ်ရှားဘဲ အသေဖြစ်နေတဲ့ Fixed Contact တွေပါပါတယ်။
Relay ကို ဘာလို့ သုံးတာလဲ?
Relay ဆိုတာကို သေချာသိဖို့အတွက်က Relay ကို ဘာလို့သုံးဖို့လိုတာလဲ (Relay ကိုမသုံးရင် မရဘူး လား) ဆိုတာသေချာသိဖို့လိုပါတယ်။ Relay ဆိုတာ လျှပ်စစ်သံလိုက် ခလုတ်လေးတစ်ခုဆိုတာ သိပြီးပြီဆိုရင် သူ့ကို ဘယ်နေရာမှာသုံးတာလဲ၊ ဘာအတွက်သုံးတာလဲ ဆိုတာထပ်ပြောပြပါမယ်။
Relay ဘယ်မှာသုံးတာမပြောခင် ကျနော်တို့ Circuit ပတ်လမ်းတစ်ခုကို စဉ်းစားကြည့်ပါမယ်။ Circuit ပတ်လမ်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ ကျနော်တို့ Power Supply ပေးမယ့် Battery လိုမယ်၊ နောက် Current တွေစီးဆင်းနိုင်မယ့် ဝါယာကြိုးတွေလိုမယ်၊ နောက် Load သုံးမယ့် ပစ္စည်း ( Bulb , Horn , Fan Motor) ရယ်၊ နောက် အပိတ်အဖွင့်လုပ်မယ့် ခလုတ်ရယ်ပေါ့။
ဒီလို Load သုံးမယ် ပစ္စည်းရယ်၊ ဝါယာကြိုးရယ်၊ Battery ရယ်၊ အဖွင့်အပိတ် ခလုတ် (Switch) ရယ် ရှိရင် ရပြီဆိုပေမဲ့ တကယ်တမ်းလက်တွေ့မှာ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ဆိုရင် တချို့ပစ္စည်းတွေ Current နည်းနည်းလေးပဲဆွဲလို့ အဆင်ပြေပေမဲ့ တချို့ပစ္စည်းတွေက ဝန် (Current) အများကြီးဆွဲတဲ့အခါ အဖွင့်အပိတ်လုပ်ပေးမယ့် ရိုးရိုး Switch တွေက မခံနိုင်ဘဲ လောင်ကုန်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် Fan Motor တွေလို၊ Starter Motor တွေလို၊ ကားရှေ့မီးကြီးတွေလို Current အများကြီးဆွဲမယ့် ကောင်တွေကို ရိုးရိုး ခလုတ်နဲ့ တွဲပြီးသုံးလို့ ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေပါဘူး။ ဒီတော့ Electromagnetic Switch ဖြစ်တဲ့ Relay တွေကို အစားထိုးသုံးစွဲတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Relay ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ?
Relay ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာ မပြောခင် Relay မှာပါတဲ့ သိရမယ့် အဓိက ၂ ပိုင်း ကို အရင်ပြောပါမယ်။
၁။ Relay မှာပါတဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်ကိုဆွဲစေမယ့် အပိုင်း (အဆွဲပိုင်း)
၂။ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဖြစ်ပြီး Relay ဆွဲတဲ့အခါ တစ်ဖက်က Armature ကနေ Contact တွေကို ထိစေ ကပ်စေမယ့်အပိုင်းပါ (အလိုက်ပိုင်း)
Relay တစ်ခုက အဲဒီ ၂ ပိုင်းနဲ့ အဓိက အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ Relay မှာတဲ့ Coil တွေကို လျှပ်စစ်ဓာတ်ပေး လိုက်တဲ့အခါ အဲဒီ Coil မှာ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဖြစ်ပေါ်လာပြီး နဂိုကပွင့်နေတဲ့ လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့ Armature မောင်းတံလေးက Contact Point အသေကို သွားထိကပ်ပါတယ်။ Coil တွေကို လျှပ်စစ်ဓာတ် ဖြတ်တောက်လိုက်တဲ့အခါ Armature မောင်းတံလေးနဲ့ အဲဒီ Point လေးတွေက ပြန်ကွာသွားပါတယ်။ ဒါကြောင့် Relay ကပ်ရင် ကွာရင် “ချပ်ချပ် “ ဆိုတဲ့ အသံလေးတွေ ကြားရတာပါ။
Coil မှာပါတဲ့ ကြိုးတွေကို (Battery အပေါင်း+ တစ်ကြိုး အနှုတ်- တစ်ကြိုး) အဆွဲကြိုးလို့ခေါ်ကြပြီး အဲ့ဒီကောင်ကတော့ Current နည်းနည်းလေးပဲ သုံးစွဲပါတယ်။ တဖက်က Coil ဆွဲတဲ့အခါ အကပ်အကွာလုပ်တဲ့ လမ်းလွှဲသဘော Armature မောင်းတံတွေမှာတော့ Current များများသုံးစွဲနိုင်အောင် ဝန်ထမ်းနိုင်အောင် လုပ်ထားပါတယ်။ အဲ့ဒီလမ်းလွှဲ လမ်းကြောင်း ကနေပဲ ကျနော်တို့ ကားမှာပါတဲ့ Fan Motor တွေ၊ Horn တွေ၊ မီးကြီးတွေ၊ Starter Motor တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ Current (လျှပ်စီး) တွေ ပို့ပေးပါတယ်။ ဒါဆို Current ကြိုက်သလောက်ဆွဲ ဘာခလုတ်မှ လောင်စရာမရှိတော့ပါဘူး။
အောက်ကပုံကို ကြည့်ရင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရမှာပါ။
Relay ဆိုတာ Coil အစ ၂စ ကို အပေါင်းအနှုတ်ပေးလိုက်ရင် အဲ့ကွိုင်တွေက Electromagnetic ဖြစ်ပြီး တဖက်က Contact Point နှစ်ခုကို ထိကပ်ပေးတယ်ဆိုတာမြင်ရင် လုံးဝရှင်းသွားမယ်ထင်ပါတယ်။
တဖက်က Contact Point နှစ်ခုက High Current အတွက်သုံးတာများလို့သာ High Current ဆိုပြီးရေးပြထားတာ တကယ်တော့ သူက အပိတ်အဖွင့်လုပ်တာမို့ ဉာဏ်ရှိသလို အသုံးချရပါတယ်။ အပေါင်း (+) Voltage ထွက်ချင် တစ်စမှာ အပေါင်းထည့်ပေးရင် Relay ဆွဲတာနဲ့ Contact Point တွေကပ်ပြီး နောက် တစ်စမှာ အပေါင်း (+) Voltage ထွက်လာမှာပါ။ အနှုတ်ထွက်ချင်ရင်တော့ အနှုတ်ထည့်ပေးလိုက် ။ တစ်စမှာ အနှုတ်ထည့် နောက်ကျန်တစ်စမှာ အပေါင်းတော့ သွားမထည့်နဲ့ပေါ့ Relay လည်းကပ်ရော Short ကျပြီး မီးထလောင်ရောဖြစ်မှာပေါ့။ ဒါလည်း အခုမှ စမ်းမယ့်သူတွေ သတိထားစေဖို့ပါ။
4 ငုတ် Relay
အပေါ်က ကျနော်ရှင်းပြတဲ့ Relay သဘောတရားနဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံတွေကို နားလည်ပြီဆိုရင်4ငုတ် Relay သဘောတရားကို နားလည်ပါပြီ။ အပြင်မှာ အသုံးပြုနေကြတဲ့4ငုတ် Relay လေးတွေကို တချက်လေ့လာ ကြည့်ပါမယ်။ ဒီအောက်ကပုံလေး ဆိုရင် ကျနော်တို့အပြင်မှာ အသုံးများတဲ့ Nissan4ငုတ် Relay ပုံစံလေးပါ။
ဒီပုံကိုကြည့်ရင် 1 နဲ့ 2-ဟာ Coil နှစ်စ ဆိုတာ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရပါတယ်။ အဲဒီနှစ်စ ကို Battery (+ နဲ့ -) ကျွေးရင် Relay ဆွဲပါမယ်။ (အဆွဲ2ပင်ပါ)
နောက်3နဲ့5ကတော့ Relay ဆွဲတဲ့အခါ ထိကပ်သွားမယ့် Contact နှစ်ခုပါ။ (အလိုက်ပင်တွေပါ)
ဒီပုံလေးကို ကြည့်လိုက်ရင် အပေါ်ပုံ4Pin Mini Relay နဲ့4Pin Micro Relay ဆိုပြီး (အပေါ်ပုံအောက်ပုံ) မြင်တွေ့ရမှာပါ။
4 Pin Mini Relay ပုံလေးကို အရင်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ 86 , 85 , 87 , 84 ဆိုပြီး ငုတ်လေးငုတ် မြင်တွေ့ရမှာပါ။ သူ့ဘေးက Diagram ကြည့်လိုက်ရင် 86 နဲ့ 85 ဟာ Battery (+နဲ့-) ပေးရမယ့် Relay Coil (အဆွဲ) နှစ်စ ဖြစ်ပြီး 30 နဲ့ 87 ဟာ Relay ဆွဲတဲ့အခါ ထိကပ်သွားမယ့် Contact Point2ခုပါ (အလိုက်)။ အဲဒီမှာ ဘာထူးခြားလဲကြည့်ရင် 86 နဲ့ 85 အဆွဲပင် ငုတ်လေးတွေက သေးပြီး (ပုံမှာကြည့်ပါ) အလိုက် 87 နဲ့ 30 ငုတ်တွေက ကြီးတာ မြင်ရမှာပါ။ တကယ့် အပြင်က Relay တွေကိုကြည့်ရင် Coil ( အဆွဲ) ငုတ်2ငုတ်ဟာ အမြဲသေးပါတယ်။ Current များများစီးဖို့လိုရင် သုံးရအောင် Contact ထိမယ့် (အလိုက်) ငုတ်တွေက အမြဲကြီးပါတယ်။ ဒါဆို သူ့အောက်က Micro Relay လေးကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် စမ်းပြီး ဘယ်ငုတ်က Coil (အဆွဲ)၊ ဘယ်ငုတ်က Contact ဖြစ်မယ့် (အလိုက်) တွေဆိုတာ ကြည့်တတ် သွားမယ်ထင်ပါတယ်။
4 Pin Micro Relay အတွက် 1 နဲ့2က Coil အတွက် အဆွဲ Pin ဖြစ်ပြီး3နဲ့5က Contact ဖြစ်မယ့် အလိုက် Pin တွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒါကတော့4ငုတ် Relay ကိုသုံးပြီး Fog Lamp မီးဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမှာကြည့်ရင် 85 နဲ့ 86 ဟာ Relay Coil နှစ်စ ဆိုတာ မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ 85 ကို Fuse ခံပြီး Battery (+B) ပေးထား ပြီး အောက်က Switch ကိုဖွင့်လိုက်တာ နဲ့ 86 ကို Ground (-) ရောက် ပါမယ်။ ဒါဆို Relay ဆွဲပါပြီ။
အဲ့လို Relay ဆွဲတာနဲ့ 30 နဲ့ 87 တို့ Contact Point တွေ ထိကပ်သွားပါမယ်။ ဒါဆိုရင်တော့ Fog Lamp ကို Battery (+B) ရောက်လာပြီး Fog Lamp မီးလင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
(4 Pin Relay ကို Switch အဖြစ်အသုံးပြုထားပုံ)
(4 Pin DC Relay ကို Switch အဖြစ်အသုံးပြုပြီး တဖက်ခြမ်းက AC Circuit ပတ်လမ်းကို ထိန်းချုပ်ပုံ)
5 ငုတ် Relay
5 ငုတ် Relay ကို အကြောင်းဖတ်မယ်ဆို4ငုတ် Relay ကို သေချာရှင်းရှင်းလင်းလင်း နားလည်ပြီးမှ ဖတ်စေချင်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင်4ငုတ်လည်း နားမလည်5ငုတ်လည်း နားမလည်ဖြစ်မှာမို့ပါ။4ငုတ် Relay ကိုသေချာနားလည်ပြီဆိုရင်တော့5ငုတ် Relay ကို ဖတ်လို့ရပါပြီ။
5 ငုတ် Relay ကို NO NC Relay လို့ခေါ်ကြပါတယ်။
NO ဆိုတာက Normally Open ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ Relay မဆွဲသေးတဲ့အချိန် Open (မထိကပ်ဘူး) ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ။
NC ဆိုတာကတော့ Normally Closed ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။ Relay မဆွဲသေးတဲ့အချိန် Closed (ထိကပ်) နေတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ပါ။
ဒီပုံလေးကိုကြည့်ရင် Coil အတွက် အဆွဲ2စ (+နဲ့-) ကတော့ ထူးထွေရှင်းပြစရာမလိုတော့ပါဘူး။ နောက် ထပ်ငုတ်3ခုက C ဆိုတဲ့ Common ငုတ်ရယ် ၊ NC ရယ် NO ရယ် ဆိုပြီး အားလုံး ငုတ်5ခုရှိပါတယ်။
Coil ကို Voltage မပေးသေးခင် Relay မဆွဲသေးခင် အခြေနေမှာ Common (C) နဲ့ NC က ထိကပ်နေပါတယ်။
Coil ကို Voltage ပေးလိုက်လို့ Relay ဆွဲလိုက်တာနဲ့ Common (C) က NC ကနေ ကွာသွားပြီး NO ကို သွားကပ်ပါတယ်။ Coil ကို Voltage ပေးတာ ဖြတ်လိုက်လို့ Relay ပြန်ကွာသွားတာနဲ့ Common (C) နဲ့ NC ပြန်ကပ်ပါတယ်။ ဒီလို နည်းနဲ့5ငုတ် Relay က အလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းရှင်းကြည့်တတ်ရင် Coil2ကိုဖယ်ထားလိုက်ရင် Common ငုတ်က NC ကို ကပ်လိုက် NO ကို ကပ်လိုက် အလုပ်လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလို5ငုတ် Relay တွေကိုတော့ မီးကြီး အနိမ့်အမြင့်ကစားတာတို့၊ မှန်တင်မှန်ချ မော်တာ ဘယ်လည် ညာလည် ကစားတာတို့မှာ အသုံးများပါတယ်။ Common ငုတ်ကို အထိုင်ထားပြီး Relay မဆွဲခင်တစ်မျိုး Relay ဆွဲသွားရင် တစ်မျိုး ကစားချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ ဒီလို5ငုတ် Relay တွေကို အသုံးများပါတယ်။
(ဒါကတော့ ဈေးကွက်ထဲမှာ ဝယ်ယူရရှိနိုင်တဲ့ 12 V Relay နမူနာပုံပါ)
Relay တွေကို တိုင်းတာစစ်ဆေးနည်း
4 ငုတ် Relay တွေ ကောင်းမကောင်းစစ်မယ်ဆိုရင်
ပထမဆုံး Coil နှစ်ငုတ် (1,3) ကို Multimeter နဲ့ တိုင်းတာကြည့်ပါ။ ပုံမှန် အားဖြင့် 50 Ohm ကနေ 120 Ohm တန်ဖိုး ကြားထဲမှာရှိရပါမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒါက ပုံသေ မှတ်ယူဖို့ခက်ခဲပါတယ် Relay ထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေရယ်၊ Relay အမျိုး အစား (5V , 9V , 12V ) တွေအပေါ် မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်တာမို့ပါ။ အကောင်းဆုံးနည်းက Coil နှစ်စကို Battery (+ ,-) ကျွေးပါ။ ဒါဆို Relay ကပ်ပါမယ်။
Relay ကပ်တဲ့အခါ တဖက်က အလိုက်စ Pin (2,4) တွေကို Multimeter နဲ့ Connection တိုင်းကြည့်ပါ။ OL (infinite) ပြတယ်ဆိုရင် Relay ကောင်းပါတယ်။ ဒါက NO ( Normally Open ) Relay တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
NC (Normally Closed ) Relay တွေအတွက်ကတော့ Relay Coil စတွေကို Battery မကျွေးခင် ကျန်တဲ့ အလိုက် စ တွေကို တိုင်းတာကြည့်ရင် OL (infinite) ဆိုတဲ့ Connection ရှိတာပြမှာဖြစ်ပြီး Relay ကို Battery ကျွေးလိုက်လို့ အလိုက် စ တွေကို တိုင်းတာကြည့်လို့ Connection မရှိဘူးပြနေရင် Relay ကောင်းတယ်လို့ မှတ်ယူနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ဘယ်လိုတိုင်းတိုင်း Connection မရှိတာ၊ Relay က Battery (+,-) ကျွေးသည့်တိုင် မကပ်တာ၊ မဆွဲတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ Relay အသစ် လဲလှယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
5 ငုတ် Relay တွေကို တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်လည်း ဒီသဘောပါပဲ။
ပထမဆုံး Coil နှစ်စကို Battery အပေါင်း အနှုတ် (+,-) မပေးခင် Common ငုတ်နဲ့ NC ငုတ်ကို တိုင်းတာကြည့်ပါ။ OL (infinite) ပြရပါမယ်။ နောက် NO ငုတ်နဲ့ Com ငုတ်ကို တိုင်းတာကြည့်ပါက Connection မရှိရပါဘူး။
နောက် Coil နှစ်စကို Battery အပေါင်း အနှုတ် (+,-) ကျွေးပြီး Common ငုတ်နဲ့ NC ငုတ်ကို တိုင်းတာကြည့်ပါ။ Relay ဆွဲနေချိန်ဆို Common ငုတ်နဲ့ NC ငုတ်မှာ Connection ရှိမနေရပါဘူး။ နောက် NO ငုတ်နဲ့ Common ငုတ်ကို တိုင်းတာကြည့်ရင်တော့ OL (infinite) တန်ဖိုးပြနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင် Relay တွေရဲ့ သဘော၊ Relay အမျိုးအစားတွေ၊ Relay အလုပ်လုပ်ပုံတွေ၊ Relay တွေ ကောင်းမကောင်းတိုင်းတာနည်းတွေကို အခြေခံကျကျနားလည်သဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီထက် Relay တွေကို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် သုံးတတ်ဖို့ကတော့ ကိုယ်တိုင်အပြင်မှာ လက်တွေ့တိုင်းတာစစ်ဆေး စမ်းသပ်ကြည့်ကြပါလို့ အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်။
တကယ်တော့ ကျနော်တို့ ကားတွေမှာရှိတဲ့ လျှပ်စစ်စနစ်တွေအားလုံးအတွက် မရှိမဖြစ် ပစ္စည်းတစ်ခုဟာ Relay ပါပဲ။ ဒီတော့ ဒီပစ္စည်းလေးအလုပ်လုပ်ပုံတွေ၊ သဘောတရားတွေကို နားလည်ထားမယ်ဆိုရင် ကားနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အသိပညာဗဟုသုတတွေ အများကြီးတိုးပွားမယ်လို့ ယုံကြည်မိပါတယ်ခင်ဗျာ။
စာဖတ်သူ မိတ်ဆွေညီကိုမောင်နှမများအားလုံး နည်းပညာဗဟုသုတ ကြွယ်ဝကြပါစေ။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကုန်ပိုင်းတွင် YBS ယာဉ်လိုင်းများတွင် နေ့စဉ်လိုက်ပါစီးနင်းသည့် ခရီးသည်ဦးရေ ၆ သိန်းကျော်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာ
ရန်ကုန်-မန္တလေး အမြန်လမ်းမကြီး ၁၁၅ မိုင်တွင် COVID-19 ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆေးစစ်ချက် စစ်ဆေးခြင်းဖြစ်ပြီး သွားလာခွင့်ပိတ်ခြင်းမဟုတ်